Galmudug oo jawaab ka bixisay hadal ka soo yeeray Puntland | Baydhabo Online
Galmudug oo jawaab ka bixisay hadal ka soo yeeray Puntland
Maamulka Galmudug, ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray Maamulka Puntland, kaasi oo ahaa gaadiidka badeecooyinka ka keena Koonfurta Somaliya inaysan u gudbi karin deeganada Puntland, islamarkaana badeecooyinka ay ku wareejinayaan gaadiid kale oo Gaalkacyo qaybteeda waqooyi laga sii qaadi doono.
Wasiirka Dastuurka Maamulka Galmudug oo ku sugan Magaalada Gaalkacyo ayaa hadalkaasi ka jawaabay, isaga oo sheegay amarka ka soo baxay Puntland inuu yahay mid caqabad ku noqonaya Ganacsiga dadka Somaliyed.
Cismaan Maxamed Cali, Wasiirka Dastuurka Maamulka Galmudug, ayaa isweydiiyay cida Puntland u sheegtay gaadiidka qaraxyada inay ka yimaadaan kaliya Koonfurta Somaliya, waxaase uu sheegay ficilada Puntland ay qaadayaan inay noqon karaan kuwa ka sii dara ammaanka deeganadooda.
“Ficillada ay mar walba Puntland sameynayaan oo ay isleeyihiin ammaanka ku suga waa ay ka daraan, maxaa yeelay yaa iyaga u sheegay in dadka wax dila ay ka yimaadeen Koonfurta, haddii taas ay sii socotana waxaa dhici doonta in la yiraahdo dadka iyo badeecada ka imaanaya Puntland in la joojiyo taasna shacabka Soomaaliyeed beey dhibaato ku tahay meel walba oo ay joogaan” ayuu yiri wasiirka Dastuurka dowladda Galmudug.
Wasiirka Dastuurka Maamulka Galmudug ayaa sidoo kale sheegay Puntland inuu ugu baaqaayo inay ka fiirsadaan go’aanada ay qaadanayaan ee ku aadan suggida ammaanka.
“Waxaan Puntland u soo jeedinayaa in Puntland ay ka fiirsadaan tallaabooyinka ay qaadayaan waxaan u soo jeedinayaa inay fahmaan cawaaqibka ka dhalan kara, Annaga mar walba haddaan Galmudug nahay in ganacsiga Soomaalida u uxor ahaado waa mabda’ayagu.” ayuu yiri mar kale wasiirka dastuurka Galmudug.
Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Puntland ayaa soo saaray amarka ku aadan in gaadiidka badeecadaha ka keena Koonfurta Somaliya aysan u gudbi karin waqooyiga Magaalada Gaalkacyo.